Wararka - KHIBRAD MOLD CAP
Waxaan ku aruuray heerka ugu horumarsan iyo sare ee caaryada cap caaryada wax soo saarka ee Chin.
Xogta badeecadaha dusha qalooca waxaa akhriya CMM si loo hubiyo saxnaanta xogta iyo saxsanaanta alaabada caaryada ah.
Biyo wareegaya ayaa lagu daraa qaybta aasaasiga ah ee dunta samaynta, si miiqda ay u fududaato in la qaabeeyo ka dib markii la sameeyo.
Dunta dunta waxaa lagu sameeyaa iyadoo la shiidayo, oo dunta la sameeyay ayaa ah mid qurux badan oo waarta, midabkuna waa dhalaalayaa. Sida haddii qaybta dunta lagu qurxiyo muraayadda, dhalaalka sheyga la sameeyay waa isku mid.
Daloolada caaryada iyo udub-dhexaadka iyo qaybaha kale ee muhiimka ah waxaa lagu baaraandegayaa qaybo madax-bannaan. Kadib marka howsha godadka la dhammeeyo, waxaa la geliyaa uurjiifka dhinta. Kaliya maahan mid ku habboon in la dayactiro caaryada, laakiin sidoo kale waa la hagaajin karaa caaryada marka wali lagu rakibayo mashiinka, alaabada ay soo saartay caaryada lama kala goyn doono. Sii wadida wax soo saarku waxay bixisaa shuruudo wanaagsan oo si buuxda loogu adeegsado caaryada si loo buuxiyo amarka
Isticmaalidda qalabka wax lagu shiido ee gudaha iyo dibedda ah si loo farsameeyo xuddunta hore iyo gadaasha dambe ee caaryada, si adag u xakamee tayada habka wax-u-qabadka, si isdaba-joog ah u miisaam miiska, qaladka saxsanaantuna uusan ka badneyn 0.02mm.
Dunta gudaha ee daboolka dhalada balaastigga ah waxaa lagu sameeyay ilkaha qoto dheer sameynta iyo dekedda cirbadeynta ayaa lagu daaweeyay daboolka dhalada.
Nidaam macquul ah oo biyaha wareegaya oo loogu talagalay dunta qafiifka ah ee jirka iyo qaabka sare ee caarada ayaa yareyn kara waqtiga wareegga soo-saarka, hagaajinta wax-soo-saarka wax-soo-saarka iyo ka-dhigista xargaha ma fududa in la beddelo
Saxanka biiyaha ee caaryada waxaa lagu daraa madaxa taageerada si dhimashadu aysan u beddelmin shilka ka dib hawlgalka muddada dheer.
Xulashada qalabka weelka ee hufan iyo dhalaalaya waa in lagu waafajiyaa xulashada qalabka caaryada. Yaraanshaha weelka la dhammeeyey iyo isku xirnaanta inta lagu jiro isku imaatinka waa in la barto, iyo waaya-aragnimada iyo soo-jeedinta ka hor soo-saarka caaryada waa in la siiyaa.
Udub-dhexaadka caaryadu waa kululaadeen, nolosha dhimatayna waa mid aad u saraysa malaayiin jeer, taas oo si wax ku ool ah u yareyn karta qiimaha badeecada.
Waxaan ahmiyad weyn siineynaa codsiga nidaamka wareejinta biyaha wareejinta wax soo saarka caaryada, oo si wax ku ool ah u xakameyn kara wareegga waxqabadka, hagaajinta wax soo saarka wax soo saarka iyo yareynta qiimaha.